Eurocopter Dauphin 365 N2 FS2004 AS DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 6.24 ကို MB
downloads ရယူရန္ 16 894
Author: Antti Pankkone, အလန် Devins, Keith Devins, Niki Jellinek, ဂျော့ခ်ျ Arana, Fabien VENRIES
Rikoooo ၏အရောင်အဆင်း (အဟောင်းတွေ) နဲ့မော်ဒယ်။ တဦးတည်း repaint နှင့်အတူရရှိနိုင်။ Auto-လေယာဉ်မှူးထံမှပျံသန်းအကူအညီဖြင့်အလိုအလျောက်စာရေးကိရိယာ။ အလုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သော! ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်: အရမ်းတည်ငြိမ်ပြီးပျံသန်းဖို့မလွယ်ကူရဟတ်ယာဉ်။ ယခုက Download လုပ်!
အဆိုပါ Dauphin အ Alouette III ကိုမှပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Sud-လေကြောင်းကိုဆက်ခံခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းစွယ်စုံအလတ်စားရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Eurocopter ၏ပြင်သစ်နျဌာနခှဲဖြစ်လာခဲ့သည် 1992 အတွက်ရဟတ်ယာဉ်ဌာနခွဲအပါအဝင်အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းများ, အမျိုးသားလူ့အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, အရပ်ဘက်နှင့်စစ်ဘက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်တော်မူပြီ။ အဆိုပါ Dauphin လည်းတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များ Eurocopter Panther ၏မိသားစုနှင့် EC155 designated အရပ်ဘက်လေယာဉ်တစ်စင်း၏မျိုးဆက်သစ်ဖို့မြင့်တက်ပေးထားတယျ။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
Policia FS350 - 2004 Ecureuil AS Eurocopter
Eurocopter EC အ 135 T2 Carillon FS2004